ကျောက်ဆည်မြို့မှကြောက်စရာ အခြေအနေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » ကျောက်ဆည်မြို့မှကြောက်စရာ အခြေအနေ
Posted by thihayarzar on Aug 16, 2010 in Buddhism | 18 comments
ကျောက်ဆည်မြို့သည် မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင် မန္တလေးတိုင်းတွင် တည်ရှိသည်။ ကျောက်ဆည်မြို့သည် အနော်ရထာမင်းတရားကြီး၏ ကောင်းမှုတော်ကြောင့် မြစ်ချောင်းများ ဆည်တာတမံများ တည်ရှိသော လယ်တွင်းကိုးခရိုင်နယ်မြေဖြစ်သည်။ စက်ရုံတွေလည်း အများအပြားတည်ရှိသည်။ ဘာသာရေးနဲ့ပက်သက်လို့လည်း ရှေးဟောင်းစေတီပုထိုးများ များစွာ တည်ရှိသည်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းများလည်း အများအပြားတည်ရှိသည်။ ကျောက်ဆည်မြို့ရှိ ရွှေသာလျောင်းတောင်တော်သည် သူတော်စင်များ တရားအားထုက်ရာနေရာဖြစ်သည့် အလျှောက် ရဟန်းနာအရှင်သူမြတ်တို့လည်း ထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။ အခုအခါတွင် ကျောက်ဆည်မြို့တွင် ကုလားများနေရာယူကာ စီးပွားရေးနယ်ချဲ့ခြင်း ဘာသာရေးနယ်ချဲ့ခြင်း နေရာများအား ရယူခြင်းများ အများအပြား ရှိနေပါပြီ။ ကုလားဗလီကြီးများကိုလည်း အကြီးကြီးများ ဆောက်လုပ်နေကြပါသည်။ ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရသည် ကုလားများနှင့်တရုက်များအား ကြောက်ရတယ်လို့ထင်မိပါသည်။ တရုက်ကိုမပြောချင်ပါ ကုလားများကိုသာ ပြောချင်ပါသည်။ ကျောက်ဆည်မြို့တွင် ကုလား ဗလီကြီးများ (၅) ခုရှိပါသည်။ ကုလားများလည်း လူဦးရေများပြားလာပါသည်။ စီးပွားရေးတွင်လည်း ကုလားဆိုင်များသည် များပြားပြီး မြန်မာလူမျိုးများမှာ လက်လုပ်လက်စားများသည်။ ကုလားဆိုင်အများအပြားတွင် မြန်မာလူမျိုးအလုပ်သမားများကို ခန့်အပ်ထားခြင်းမရှိပါ။ ကုလားများကိုသာ ခန့်အပ်ထားပါသည်။ ကျောက်ဆည်မြို့တွင်ကုလားများ များပြားလာတာနှင့်အမျှ ကုလားကိုယူသော မြန်မာမများလည်း များပြားလာသည်။ ကုလားမကိုယူသော မြန်မာသာမရှိသလောက်ပါ။ ကုလားမများသည် များသောအားဖြင့် မြန်မာလူမျိုးများကို မယူကြပါ။ မြန်မာအမျိုးသမီးများကတော့ ဆန့်ကျင်ဘက်သာဖြစ်သည်။ တွေးတိုင်းရင်နာလို့ ပြောနေတာပါ။ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ ကုလားတွေကို မြန်မာနိုင်ငံထဲက အပြီးတိုင်အောင် မောင်းထုက်နိုင်မယ့် အစိုးရကိုလိုလားပါတယ်။ ကုလားတွေများလာတော့ မိုက်ချင်လာတယ်ဗျာ။ အရင်ကဆို ကုက်နေကြတာ အခုတော့ ထကြွလာကြပြီ။ လူများလာပြီလေ သူတို့ကပြန်ချလို့ရနေပြီ။ အားလုံးကို အမှုန့်ကြိတ်ပစ်ချင်တာ။ ကုလားများကို ရှောင်ကြပါ။ ကုလားဆိုင်မှာမ၀ယ်ကြပါနဲ့။ မြန်မာလူမျိုးချင်းပဲ ဘယ်လောက်ပေးရပေးရ အားပေးကြပါ။ ကုလားကို အပေါင်းအသင်းအလုပ်ပါနဲ့။
thiha yarzar has written 76 post in this Website..
View all posts by thihayarzar →
ကြားရတာစိတ်မကောင်းစရာပါ။ ကျောက်ဆည် သားကြီး ကိုက ကြောက်စရာကြီးကိုး ..သေ သေ ချာချာကြည့်ရင် ကုလားရုပ်ဗျ။ သူ့အရင်မောင်းထုတ်ရမှာ။
thihayarzar ပြောတဲ့အတိုင်းဆို ကျောက်ဆည်မှာ ဗလီတွေများနေပြီဘဲ။ဒီကိစ္စက စောက်သုံးမကျတဲ့ဒီအစိုးရကြောင့်ဘဲ၊ရန်ကုန်တိုင်းမှာလဲ မျိုးညွန့်လက်ထက်မှာ ဗလီတွေပိုများပြီးပုိကြီးလာတယ်၊သူတို့က ကျနော်တို့စောက်ရူးအစိုးရရဲ့အထာကိုသိတော့ငွေနဲ့ဝင်ပေါက်ပစ်တာဗျ။စည်ပင်နဲ့ဆောက်လုပ်ရေးကိုပြုင်ရန်လျှောက်၊ပြီးတော့အပြင်လူလုံးဝမမြင်ရအောင် အကာအရံတွေလုပ်၊အားလုံးပြီးလို့ဖွင့်လိုက်တော့မှ ယ္ခင်ဗလီသေးသေးလေးကနေ အကြီးကြီးဆောက်ပြီးနေပြီ။ခု ကျောက်ဆည်လဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့တောင်ညွန့်ဘင်္ဂါလီစုလိုဖြစ်ပြီပေါ့ဗျာ။ ဘင်္ဂါလီစုမှာဆိုဗမာကိုမရှိသလောက်ဖျြစ်သွားပြီ။ရှိတဲ့လူနဲစုကလည်းကုလားကြားမှာမနေချင်တော့ရွှေ့၊ဒီလိုနဲ့သူတို့နေရာတွေယူလာကြတာဘဲ။မွန်ပြည်နယ်က သူဌေးကြီးဥိးနာအောက်ရဲ့ရွာဆိုရင်လဲ ကုလားရွာဖြစ်သွားလို့အဲဒီက ဘုန်းကြီးတွေ ဆွမ်းတောင်မရတော့ဘူး။မြို့ပေါ်က ပို့လှူနေရတာကြာပြီ။ဒီအတိုင်းလွှတ်ထားရင်တော့ကျနော်တို့တိုင်းပြည် ရင်လေးစရာပါ။
I worried about the general sentiments of comments and main article, their views and directions. Racism, religious discrimination and sexism are the biggest terrors comparable to the fascist military regime. Indian are settling very well in traditional strong-hold of Burmese and it must raise the eye brows of readers. Indian and Chinese are very good at running businesses and handling of money. We should learn from their success, not to get jealous at the other well-to-do races. We all are the same in this beautiful planet we shared equally. If we look at the modern history of our country, the Indian exodus of thousands happened in 1950s. Why? Who make these Burmese-born Indian/ resident Indian to leave the country they dearly love? It is wrong policy of government in 1950s. To hide the failed policy and to distract the public anger to other matter, government drum up the support in racial hatred. Karen and Mon, Shan were targeted for their genuine strive for federalism we all dearly agreed in Panglong. The professional soldiers of ethnic origins were persecuted by then government and make the dictator-in-making playboy General Ne Win as army chief. It is racism which killed young democracy of Burma, which brought the miserable mess of current fascist regimes. If we hate Fascism, we must try to change our image. Look at the recent news in New York which sawagiant Moss mushroomed besides the sacred Ground Zero. The Americans out of sad memory of 9/11 incidence demanded Moslem to abandon the planned building of moss near the Gzero. The President Obama defended the right of Moslem asareligion to go ahead with their building saying that this is American value enshrined in their beloved constitution. I came across some of my countrymen who hate the success of Chinese and Indian in Burma. I wish we could value the rights of others before we can strive to bring back democracy and human right back to our motherland. I do not codon the act of bribe given to Junta by any religion to expand their religion. But I do respect the right of individuals, race, religion, sex, sexual orientation and ideology. I do wish Burma will gain flourishing multi-cultural democracy soon. I wish people will change their stance towards foreigners.
လူမျိုးထဲမှာ ကုလါး ကိုအမုန်းဆုံးဘဲ အခွင့်သာယင်ချသာချအားပေးတယ် ဘယ်လိုမှပေါင်းလို့မရတဲ့လူမျိုးကွ အာဖကန်နစ္စတန် မလေးရှား အင်ဒိုနီရှားနိုင်ငံတွေဟာ တချိန်ကဗုဒ္ဓဘာသာအင်မတန်ထွန်းကားခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေ ခုမွတ်ဆလင်နိုင်ငံတွေဖြစ်ကုန်ပြီ ဒီဘာသာသဘေားကိုကသွေးနှောပြီးဘာသာကျယ်ပြန့်အောင်လုပ်တာကိုအာပေးတဲ့ဘာသာဘဲ မြန်မာတွေမပေါ့နဲ့ မျိုးပြုတ်သွားမယ်စေတနာနဲ့ပြောတာ သွေးနှေားပြီးမွေးလါတဲ့ခလေးအားလုံးမွတ်တွေပဲဖြစ်တာ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တာမမြင်ဖူးဘူး ကိုရမ်ကျမ်းကလွဲယင်အခြားဘာသာစာပေတွေကိုဖတ်ခွင့်လေ့လါခွင့်မရှိအားလဲမပေး ။ ။
ကျွန်တော်လည်း စိတ်ပူပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ကုလားလူဦးရေဟာ မြန်မာတွေထက် အဆမတန် တိုးပွားနေပါတယ်။ ကျွန်တော်ဆိုလိုတာက လူဦးရေတိုးပွားနှုန်းကိုပြောတာပါ။ အဲလို တိုးပွားနှုန်းနဲ့သာဆိုရင် နောက်ထပ် ၁၅နှစ်၊ နှစ်(၂၀)လောက်ကြာရင် မြန်မာပြည်လူဦးရေရဲ့ ငါးပုံတစ်ပုံ (သို့မဟုတ်) လေးပုံတစ်ပုံ လောက်အထိ ရောက်လာနိုင်ဖွယ်ရာရှိပါတယ်။ အဲလောက်အခြေအနေထိရောက်လာခဲ့ရင်တော့ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရတဲ့ ပြဿနာတွေ၊ အဓိကရုဏ်းတွေ ဖြစ်ပွားလာနိုင်ပါတယ်။ ပါလက်စတိုင်းနဲ့ ဂျူးပြဿနာကိုကြည့်ပါ။ နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ ဒီအချက်ကို သတိပြုပြီး လူမျိုမှ လူမျိုးပြုတ်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို သတိရပြီး အနာဂတ်မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်း အေးချမ်းသာယာရေးအတွက်၊ အမျိုးဘာသာ၊ သာသနာတည်တံ့ရေးအတွက် ကုလားလူဦးရေတိုးပွားမှုထိန်းချုပ်ရေးကို ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်သင့်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်မြင်တာမမှားရင် မြန်မာမိသားစုက သားသမီး (၃-၄)ယောက်ပဲ မွေးတဲ့အချိန်မှာ ကုလားမိသားစုက (၉-၁၀)ယောက်လောက်မွေးနေပါတယ်။ ကျွန်တော့အနေနဲ့ကတော့ တစ်ဖက်သားရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဓလေ့ထုံးစံ၊ ဘာသာရေးကို လေးစားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီပုံအတိုင်းသာ ဆက်သွားနေရင် မကြာခင် လူဦးရေ တစ်ဖက်စောင်းနင်းဖြစ်လာပြီး လူမျိုးရေးပြဿနာတွေဆီ ရောက်သွားနိုင်တာမိုလို့ ဝင်ပြောမိတာပါ။ အခုတောင်မှ တောင်ညွန့်၊ တာမွေတွေမှာ မြန်မာတွေမရှိတော့ပဲ ကုလားတွေက မြို့တစ်မြို့ သတ်သတ်လို ဖြစ်သွားပါပြီ။ အဲဒီနေရာမှာ သွားနေမိတဲ့ မြန်မာအနေနဲ့ ရယကရုံး ဧည့်စာရင်းတိုင်သွားရင်တောင်မှ မျက်နှာငယ်ရသလို ဖြစ်ရပါတယ်။ လူဦးရေထိန်းချုပ်ရေး အစီအမံတွေကို နိုင်ငံတော်က ဦးဆောင်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ ပညာရှင်များနဲ့ လေးလေးနက်နက် တိုင်ပင် ဆုံးဖြတ်သင့်ပါကြောင်း အကြံပြုလိုပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်ကလည်း လက်လွန်နေပြီးဖြစ်တဲ့ တောင်ညွန့်နဲ့ တာမွေကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာမှ စနစ်တကျနဲ့ မြန်မာလူမျိုးများကို နေရာချထားပေးသင့်ကြောင်း၊ အိမ်ရောင်း၊အိမ်ငှားစည်းကမ်းကို မြန်မာအချင်းချင်းသာ လွှဲပြောင်းရန် တင်းကျပ်ထားသင့်ကြောင်း၊ မြန်မာအချင်းချင်းအနေနဲ့လည်း မျိုးချစ်စိတ်ရှိရှိနဲ့ စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ ရှိနေသင့်ကြောင်း အကြံပြုချင်ပါတယ်။
ဘာသာခြား၊လူမျိုးခြားများအား ရန်လိုမုန်းထားသော စိတ်ထားမရှိပါ။ ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူနေထိုင်လိုပါတယ်။ သိုသော် မီးဘေးရှောင်၊ မလောင်ခင်တား ဆိုသလို၊ အနာဂတ်မှာဖြစ်လာမယ့် အန္တရာယ်ကို တွေးမိတဲ့မြန်မာတစ်ယောက်အနေနဲ့ ပြဿနာကို မကြီးခင် ကြိုတင်တားဆီးနိုင်ရန် အကြံပြုခြင်းမျှသာ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ကုလားတွေက အကျင့်မကောင်းတာလူတိုင်းသိတယ် ။ ဒါကို ဘယ်လိုမိန်းမမျိုးတွေက ကုလားကိုလင်တော်ချင်သေးလည်းမသိဘူး ။ ခွေးကိုအမြီးဖြတ်ပြီးယူတာတောင် ကုလားယူတာထက်မြတ်တယ် ။ လူမျိုးပြုတ်မှာတောင်စိုးရိမ်ဖွယ်ရှိတယ် သတိထားကြပါ ။
ကုလားတွေ – အကြောင်းသိခြင်ရင် – – ဦးနုရဲ့ ဘာသာကြီးလေးရပ်ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကိုလေ့လာကြည့်ကြပါ-
ကျတော် မှတ်မိသလောက် – သူတို့ဘာသာရဲ့ – အဓိကအချက်နဲနဲလောက်ဘဲမှတ်မိပါတယ်
– ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးကို – သူတို့ – မွတ်စ် ဘာသာလွှမ်းမိုးစေရမယ်။
– မွတ်စ် ယောင်္ကျားတွေက တခြားဘာသာဝင် အမျိုးသမီးတွေကို ယူပြီးလူးမျိုးပြန့်ပွားအောင်လုပ်ရမယ်။
– မွတ်စ် ဘာသာဝင်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်
(ဒီထဲမှာ..တခြားဘာသာဝင် အမျိုးသမီးတွေရဲ့ – သာမာန်အဆင့်၊ပညာတပ်/ပညာရှင်အဆင့်၊ရာထူးဂုဏ်ထူးအဆင့်)
စသည်ဖြင့် ယူနိုင်သူတွေကို – မွတ်စ် ဘာသာဝင်တွေက အဆင့်လိုက် ၀ိုင်းဝန်းပြီး ထောက်ပံ့ကြရမယ်။
– မွတ်စ် အမျိုးသမီးတွေ တခြားဘာသာဝင် အမျိုးသားကိုယူရင် သေဒဏ်။
– မျက်လုံး ကို မျက်လုံးခြင်း လက်တစ်ဖက် ကို လက်တစ်ဖက်ခြင်း ပြန်ပြီးတုန့်ပြန်ဂလဲ့စားချေရမယ်။
– ဒီလို ဒို့ဘာသာနဲ့ ဗြောင်းပြန်ဖြစ်နေတာ- အထက်ကပြောခဲ့ကြသလို-
– ဒို့နိုင်ငံမှာ – – နေရာအနှံ့ မွတ်စ် တွေပြန့်ပွားပြီးနေရာယူ ထိုးစစ် ခံစစ်တွေယူနေကြတယ်
– ဒါကို နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်တွေက ခေါင်းရှောင်နေကြတယ် (ကိုယ်ထိုင်ခုံ မကျိုးဘို့ဘဲဂရုစိုက်နေတာလေ)
– ဒါ့ကြောင့် – ငါတို့ မြန်မာမိန်းကလေးတွေ – ကိုအထူးသတိပေးချင်ပါတယ်-
– ရှေးလူကြီးတွေရဲ့ စကားရှိပါတယ် – * မြေမြိုလို့.. လူမျိုးမပြုတ်ဘူး၊ – လူမျိုမှ–လူမျိုးပြုတ်တယ် *
ကုလားတိုင်းပြည်မှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတခု သွားဆောက်မယ်ဆို ဘယ်လိုလုပ်မလဲ အုပ်လိုက်ကျင်းလိုက် ကျီးကန်းများလို ၀ိုင်းအော်ပြီး လိုက်ဆိတ်မှာ။ ခရိယာန်သာသနာပြုတွေ သွားတာတောင် ဘာလုပ်ပြစ်လဲ အသိသာကြီး သည်းခံသူများ ကို တိုးတိုးပြီး နယ်ချဲ့ပြီး လူကို လူမြိုဖို့ ကြိုးစားနေကြတာဘဲ
ဒူပိုင်း လိုနေရာမျိုးမှာတောင် ဘာသာရေးကို တခုထဲ ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်သေးရင်
ဒို့ မြန်မာမိန်းခလေးတွေတွေ့ တယ်မလား ( မြန်မာနော်မြန်မာ) ထပ်မပြောတော့ ဘူး….သိသင့် တယ်
ဒီကုတွေအကြောင်းကို ကျွန်တော် BladEလဲဒီကောင်တွေအကြောင်းကို သိရသလောက်သိနေသလောက်တင်ပြသွားမှာပါ..ရင်ထဲအသည်းထဲကကိုရေးချင်နေတာပါ..
ဒီတော့ကျွန်တော်တို.တွေ ဒီနေ.ဒီရက်ကစပြီကုလားနဲ.ပတ်သတ်တာဆို ရိုင်းအောင်ပြောရရင်တတွေးတောင်လှည်.မထွေးကြပါနဲ.ဗျာ..တကယ်ပါမုန်းလွန်းလို..ပါဗျာ
please do like this way
ကျွန်တော်တို.တွေ ကုလားမ မဲမဲကြီးတွေကို ယူကြမယ်လေ
chitsayar ကောင်လေး မင်းကအားကျမခံကုလားမမဲမဲကြီးတွေကိုယူဘို့ကြံနေလါး ငါ့အကိုဝမ်းကွဲတယောက်မွတ် ကုလားမတယောက်ယူလိုက်တာ သူ့ထိပ်အဖြတ်ခံလိုက်ရတယ် သူ့ခလေး၃ယောက်လုံး မွတ် ဖြစ်သွားတယ် မင်းလဲတော်နေကြာထိပ်အဖြတ်ခံနေရအုံးမယ် ဟဲဟဲ
ကိုထွန်းနော်က အကိုကို ဘာမှမပြောဘူးလား .. နည်းနည်းမှမစည်းရုံးဘူးလား … ကျွန်တော်ကတော့ ဈေးဝယ်ရင်တောင်မှ ဗမာဆိုင်နဲ့ ကုလားမကိုယူတဲ့ ဗမာဆိုင်မှာပဲဝယ်တယ်. ကုလားမယူတဲ့ဆိုင်ကို ပိုအားပေးတယ် …
Nyan Phyo Myint says:
ကျွန်ုပ်တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံ၌ နေစဉ် အမျိုးဘာသာ သာသနာကို ချစ်
မြတ်နို၍ စောင့်ရှောက်သောအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး စီးပွားရေး ၊
လူမှုရေးမှအစ အချင်းချင်း ရိုင်းပင်းကူညီကြရမည် ။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်
တို့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် အပေါင်းတို့သည် စီးပွားရေး နှင့် လူမှုရေးအရ
တိုက်စစ်ဆင်သောအားဖြင့် မိမိဘက်မှတစ်ဆင့်ပြန်လည်၍ ရောင်းချ
ခြင်းမှတစ်ပါး ဤမြန်မာနိုင်ငံ အတွင်း၌ နေ့စဉ် ဈေးဝယ် သောအခါ
ကျွန်ုပ်တို့ ၏ အစ္စလာမ် အမှတ်အသားပါသော (၇၈၆) အမှတ်တံဆိပ်,
() အမှတ်တံဆိပ် နှင့် လခြမ်းပေါ်၌ ကြယ်ပွင့် အမှတ်အသား ပါသော
ဆိုင်များ ၌သာ ဈေးဝယ်ကြရမည် ။
၄င်း၏ အဓိပ္ပာယ်သည် (၇+၈+၆ ) ဂဏာန်းသုံးလုံး ပေါင်းလိုက်
သော် ( ၂၁ ) ရ၏ ။ ထို (၂၁ ) သည် ၂၁ ရာစုနှစ်သို့ရောက်သောအခါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ အစ္စလာမ်ဘာသာ တရားတော်သည် မြန်မာနိုင်ငံအပါအ၀င်
ကမ္ဘာလောကကြီးရှိ လူမျိုးအားလုံးတို့၏ ထိပ်ဆုံးက ရောက်ရှိရမည်
ဟူသော အမှတ်အသားပင် ဖြစ်သည် ။
မှတ်ချက် ။ ။ ကျွန်ုပ်တို့ အားလုံးသည် စီးပွါးရေး ၊ လူမှုရေးများကို
မြန်မာနိုင်ငံ ၌ အစ္စလာမ်ဘာသာ ပြန့်ပွါးရေး ၊
ထွန်းကားရေး ၊ လွှမ်းမိုးရေးအတွက် ထိုးစစ်တစ်ရပ် အနေဖြင့် အကောင်
အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ကြရမည် ။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ ၏ ဘာသာ
အမှတ်အသားပါသော ဈေးဆိုင်များမှတစ်ပါး ဘာသာခြား ၊ လူမျိုးခြား
ဖြစ်သော မြန်မာ ၊ တရုတ် ၊ ကရင် ၊ ရခိုင် စသော မြန်မာတို့၏
တိုင်းရင်းသား ဆိုင်များ၌ လုံးဝ ဈေးဝယ်ခြင်း ၊ စားသောက်ခြင်း စသော
စီးပွားရေးအရ ဆက်ဆံမှုများ မပြုလုပ်ရပေ ။ အထူးသဖြင့်
စားသောက်ဆိုင်များ၌ ( ၇၈၆ ) နှင့် ( ) အမှတ်တံဆိပ်နှင့် လခြမ်း
တံဆိပ် ဖော်ပြထားသော ဆိုင်များ၌သာ ကျွန်ုပ်တို့ အစ္စလာမ်ဘာသာ
၀င် အပေါင်းတို့အားလုံး စားသုံးကြရမည် ။
ရေးသားသူ အမဆန်ဒါနုမာမီ ၊ နှာ ၅၀၀ မှလည်းကောင်း ၊နိဒါန်း
နှာ ၃၀ မှလည်းကောင်း ၊ နှာ ၂၈၀ မှလည်းကောင်း ကောက်နုတ်တင်ပြ
မြန်မာပြည်မှာ အစ္စလာမ် သာသနာ ပြန့်ပွားရန် အလားအလာ
များစွာရှိပါသည် ။ အစ္စလာမ် သာသနာ များတိုးတက်စည်ပင်ရန် အလွယ်
ကူဆုံးနှင့် အသေချာဆုံးနည်းမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာအမျိုးသမီး များ
ကို သိမ်းပိုက်ရန်ဖြစ်ပါသည် ။ အလုပ်အကိုင် အဆင်မပြေသော
မွတ်ဆလင် ဘာသာဝင် တို့သည် မြန်မာပြည် သို့သွား၍ အသက်မွေး
၀မ်းကြောင်း ပြုကြပြီးလျှင် မြန်မာအမျိုးသမီးများကို ယူခြင်းဖြင့်
အစ္စလာမ် ဘာသာ ကို ပြန့်ပွားစေရန် အားထုတ်သင့်ပါသည် ။ မြန်မာမ
များတွင် ကိုယ်ကျင့်တရား စောင့်စည်းမှု မရှိကြပေ ။ သိမ်းပိုက်ခြင်းဖြင့်
သေချာလွယ်ကူသော အစ္စလာမ် သာသနာပြုနည်းကို ကျင့်သုံးရန်ဖြစ်
ကျွန်ုပ်တို့လူမျိုးအားလုံးအတွက် ဤမြန်မာနိုင်ငံသည် ယခုအခါ အဆိပ်
ဖြစ်ခဲ့ပြီ ။သို့အတွက်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ လူမျိုးအားလုံးသည် စည်းလုံး
ညီညွတ်ကြရမည် ။ သွေးစည်းကြရမည် ။ တတ်နိုင်သည့်ခြေကုတ်ကို ယူ
ထားကြရမည် ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဒီနိုင်ငံမှာ အပြီးအပိုင် ထွက်ခွာ သွားရ
သည့်တိုင်အောင် ကျွန်ုပ်တို့သွေးသားများ ဒီနိုင်ငံမှာ ကျန်နေခဲ့ရမည် ။
ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင် အမျိုးသမီး များနှင့် မြန်မာ တိုင်းရင်းသူများ
သည် အချိန်မရွေး ငွေပေးလျှင်ရသော ပြည့်တန်ဆာမကဲ့သို့ ဖြစ်
နေကြပြီ ။ ကျွှန်ုပ်တို့ဘာသာဝင်အားလုံးတို့သည် ယခုအချိန်၌ လှုပ်ရှား
ဖို့ အကောင်းဆုံးသော အချိန်ဖြစ်၍ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြန်မာ အမျိုးသမီး
များနှင့် မြန်မာတိုင်းရင်းသူ တို့အား သင်တို့၏ နှလုံးသွေးဖြင့်လည်း
ကောင်း ၊ စီးပွားရေး ဖြင့်လည်းကောင်း မြူဆွယ် သိမ်းသွင်းကြရမည် ။
အဓိက အချက် မှာ သူတို့၏ ကိုယ်ထဲတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ သွေးသား
များ ကျန်ရစ်နေဖို့ပင်ဖြစ်သည် ။ သင်တို့ ကြိုးစားသမျှ အကျိုးအမြတ်
ကား ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အမျိုးသမီး ရင်တွင်းသို့ သင်တို့၏ သွေးသားများ
၀င်သွားအောင် လုပ်နိုင်သူများ မူဂျာဟစ်ဗလီ မှ ငွေသားဆု လက်ဖွဲ့
ပေးမည် ။ အကယ်၍ ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင် အမျိုးသမီး လေးယောက်တို့၏
ကိုယ်တွင်းသို့ သွေးထိုး သွင်းနိုင်ခဲ့ လျှင် ဗလီမှ လစဉ် ထောက်ပံပေးမည် ။
ဘွဲ့ရပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အမျိုးသမီးဖြစ်ပါက (၂၀၀၀၀)ကျပ် ၊
ဗိုလ်မှူးသမီးဖြစ် လျှင် (၂၀၀၀၀) ကျပ် ၊ ဗိုလ်မှူး သမီး ဘွဲ့ရ လျှင်(၅၀၀၀၀)
ကျပ် ဆုပေးမည် ။ ဆုအဖြစ် လက်ဖွဲ့ပေးမည် ။ လူကို လူဖြင့် ရင်းရန်
သင်တို့အားလုံးသတိပြုရမည် ။ ဒီလို သိမ်းသွင်းနိုင်မှသာ ကျွန်ုပ်တို့
မြန်မာနိုင်ငံ၌ အဓွန့်ရှည်စွာ တည်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ် ။ ငွေကြေးထောက်ပံ့
မှုအတွက် သင်တို့အားလုံး ဘာမှပူစရာ မလိုပါ ။ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်
ဖြစ်သော ကျွန်ုပ်တို့၏ မူဂျာဟစ် အစိုးရထံမှ နှစ်စဉ် တစ်လလျှင်
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် စတာလင်ပေါင် (၅) သန်း ကို ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ဝယ်
သို့ ပို့နေပါသည် ။ သင်တို့အောင်မြင်မှုအတွက် အလိုရှိလျှင် ဗလီများ
နှင့် အမြန်ဆုံး ဆက်သွယ်ပါ ။ ဆက်သွယ်နိုင် လိမ့်မည်ဟုလည်း ကျွန်ုပ်တို့
မျှော်လင့်စောင့်စား လျက်ရှိသည် ။
ဤလက်ကမ်းစာစောင်များကို သက်ဆိုင်သူထံ မှတစ်ဆင့် မပေါက်ကြား
စေရဟု ကတိခံဝန်ချက်ပေးသော အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် မွတ်ဆလင်
မျိုး များကိုသာ ဖြန့်ဝေပေးရမည် ။
မူဆလင်တွေဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ ဘုရားဂေါပကလူကြီး နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်နှင့် မြို့ရွာအကြီးအကဲတို့ရဲ့ သမီးတွေကို ပို၍အရ ချိုင်တက်ကြပါတယ်။
ပုဂံခေတ်က ပဋိက္ခယားကုလားက မြန်မာဘုရင့်သမီးတော် ရွှေအ်ိမ်စည်ကို အရချိုင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တာဟာ အထင်ရှားဆုံး သာဓကပါပဲ။ ယခုတင်ပြချင်တာကလည်း မော်လမြိုင်မှ တန်ခိုးကြီးဘုရားတစ်ဆူတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ဂေါပကလူကြီးရဲ့ သမီး တစ်ယောက် အကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အဖေဂေါပက လူကြီးဟာ ဂေါပကတာဝန်ထမ်းဆောင်နေပေမယ့် သားသမီးတွေကို တော့ ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ရင်းနှီးအောင်မကြိုးစားလဲ ခပ်ပေါ့ပေါ့နေခဲ့လို့လည်း သူ့သမီးဟာ မူဆလင်ကုလားနဲ့ သမီးရည်စားဖြစ်စေခဲ့ရပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ်နည်းပါးတဲ့သမီးမှာ အပြစ်ရှိပေမယ့် ပေါ့ပေါ့ဆဆ နေခဲ့တဲ့ မိဘတွေမှာ ပိုပြီး အပြစ်ရှိပါတယ်။ မြန်မာတိုင်းရင်းသား မိဘတွေ အထူးသတိပြုစရာပါ။
ဒီလိုနေတာကြာလာတော့ သမီးက ‘ အိမ်ထောင်ပြုတော့မယ်‘ လို့ဖွင့်ပြောမှ ကုလားနဲ့ ဆိုတာ သိလို့ သဘောမတူဘဲ အကြီးအကျယ် ကန့်ကွက်တဲ့အခါ ကုလားက ‘ မင်္ဂလာ ဆောင်ပြီးရင် ဗုဒ္ဓဘာသာ ထဲဝင်မယ်‘လို့ အချိုသတ်ပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ မိဘတွေက ဦးနှောက်နည်းလို့ တကယ်ယုံကြည်ပြီး လက်ထပ်ခွင့် ပြုလိုက်ပါတယ်။
လက်ထပ်ပြီးတဲ့အခါလည်း ကလေးတစ်ယောက်ရရင် ဗုဒ္ဓဘာသာထဲဝင်မယ်‘ လို့ ကုလားက ထပ်မံဈေးဆစ်ပြန်တော့လည်း မိဘတွေ ဘယ်လောက်ညံ့သလဲဆို အဲဒီ ဈေးဆစ် တာကိုလည်း ယုံလိုက်ကြပြတယ်။၊ ကလေးတစ်ယောက်ရတဲ့အခါ ကုလားဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ထဲဝင်ဖို့ နေနေသာသာ ရတဲ့ကလေးကို တောင် မူဆလင်ဘာသာထဲ သွင်းဖို့ မိဘတွေဆီ ပို့လိုက်ပါတယ်။
ဂေါပကသမီးလည်း ကုလားဟာ “ဗုဒ္ဓဘာသာထဲ မဝင်ရကောင်းလား´´ဆိုပြီး စိတ်ဆိုးကာ မိဘအိမ်ကို ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ သားသမီး က တော့ (၃)ယောက်တောင် ရခဲ့ပါပြီ။
ဒါကြောင့် မိဘတွေက ဒီကောင်မ မပြတ်နိုင်ပါဘူး ဆိုပြီး သမီးကို အဓမ္မပြတ် စွန့်လွတ် လိုက်ရာမှ ကုလားအိမ်ကို အပြီးလိုက်သွားရပါတယ်။ အမျိုးဖျက် ကုလားက သူ့အိမ်ကို အပြီးလိုက်လာတော့ ‘ သူတို့ ဘာသာထဲဝင်ရမယ် ‘ လို့ပြောရာ ‘ မဝင်ဘူး‘ လို့ ပြောသဖြင့် ‘ သတ်မယ် တကဲကဲလုပ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ‘ ဝင်ပါမယ့် ‘ လို့ ပြောရာ ‘ မင်း တို့ဘာသာထဲဝင်ရင် လူမသိသူမသိ မဝင်ရဘူး ထင်ထင် ရှားရှား တစ်ခုခုလုပ်ပြပြီးမှ ဝင်ရမယ် ‘ လို့ ပြောပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ အမြတ်နိုးဆုံးဖြစ်တဲ့ ရွှေတိဂုံ ဘုရားပုံနဲ့ ဆူးလေဘုရားပုံတွေကို ခြေထောက်နဲ့ နင်းခိုင်းပါတယ်။
သူတို့လက်ခုပ်ထဲက ရေလဲဖြစ်ပြန် ကိုယ့်အသက်ကို နှမြောတဲ့အပြင် ဗုဒ္ဓဘာသာ အခြေခံလဲ နည်းပြန်တော့ မျက်ရည်စက်လက်နဲ့ဘဲ ဘုရားပုံတွေကို နင်းပြီး သူတို့ဘာသာထဲ ဝင်သွားပါတယ်။
ဒီဖြစ်ရပ်ကို ကြည့်လျှင် လူမျိုးကို စော်ကားရုံတင် အားမရဘဲ ဘာသာကိုတောင် စော်ကားခဲ့တာ ဘယ်လောက် ရင်နင့်စရာကောင်းသလဲ။ ဒါကြောင့် လူမျိုးရော ဘာသာကိုပါ ဒီလို စော်ကားမခံရအောင် အမျိုးဘာသာချစ်စိတ်ရှိကြစေရန် ကိုယ့်သားသမီးတွေကို ဆုံးမသင့်ကြပါတယ်။
ဒီဖြစ်ရပ်ဟာ နမူနာဘဲ ရှိပါသေးတယ်။ ဒီလို ဖြစ်ရပ်တွေဟာ တစ်ပြည်လုံးမှာ ပြောမဆုံးပေါင် တောသုံးထောင်ပါ။
အမျိုး ဘာသာ သာသနာကို အတူတကွ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ကြပါစို့
Prev: ရတနာသုံးပါးကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်လာသူ တစ်ယောက်အကြောင်း
Next: မွတ်ဆလင် များ၏ လျှို့ဝှက်ဖြန့်ဝေချက်
ဒီလိုသာနေရင် နောင်အနှစ်တစ်ရာလောက်မှာ ***မြန်မာနီးရှား***နိုင်ငံဆိုတာပေါ်လာလိမ့်မယ်။ စိတ်ချ ပေါ်ကိုပေါ်လာလိမ့်မယ်။ ဒီလိုသာဆက်ဖြစ်နေရင်။